Sdị nke Bekee Bee: Kedu ndị kachasị mma n'isiokwu ọ bụla? | ECommerce ozi ọma
Aha nke Ụlọikpe Bekee O sitere na ya ihe karịrị 100 afọ gara aga wee si na obere ụlọ ịkwa akwa nke etinyere na narị afọ nke 1890, kpọmkwem na 1935 na Madrid. Na 45, afọ iri anọ na ise ka emepere ya, Ramón Areces Rodríguez zụtara ya, si otú a na-amalite akụkọ azụmahịa ya.
Mgbe ọtụtụ afọ mmalite na uto nke ụlọ ahịa nke gara site na ịbụ obere ụlọ ahịa ịkwa akwa gaa na ngalaba ụlọ ahịa na mmelite na uto mgbe niile, nke nwere ya nwere ụdị nke ụlọ ikpe Bekee mbata nke sixties bụ isi ihe na Ụlọikpe Bekee, ebe ọ bụ na ọ bụ n’afọ ndị ahụ ka ọ malitere mgbasawanye na mpaghara mba ahụ, ihe a niile maka nraranye nke ebe ndị dị n’obodo ndị dị mkpa dị ka Barcelona, ​​Seville, Bilbao na ndị ọzọ.
Ke ufọt ufọt 90s, a uto na uzo di iche iche nke otu, na-aga site na ngbanwe na ọnọdụ nke onye isi otu ahụ n'ihi ọnwụ nke onye isi ala mbụ mana ọ naghị anọchite anya nkwụsị na uto ya, n'ụzọ megidere, na-achọ ịdị ike kwa ụbọchị.
N'ime mgbanwe a, ngalaba ụlọ ahịa ngalaba Courtlọikpe Bekee, Ha nwere otu isi uzo maka idu ahia ha nke oma: Ejiji.
Isi mpaghara a Ụlọikpe Bekee, ekwela ka ụlọ ọrụ ahụ mepụta afọ gara aga nnukwu ego ruru ahịa nke 8.441,5 nde euro, nke na-anọchite anya 59% nke ego niile ụlọ ọrụ ahụ nwetara.
Ọ bụ kpomkwem na mpaghara nke ejiji ebe, na-adịbeghị anya, oké mgbanwe azụmahịa atụmatụ ẹkenam site Ụlọikpe Bekee. N’ọnwa Ọktọba 2013, ụlọ ọrụ ahụ malitere mkpọsa ahụ Gbanwee ihe ọhụrụ, nke ọ na-akpọsa mbelata nke ọnụahịa ejiji ma lekwasị anya na ụdị ụlọ ọrụ nke ya.
Site na mmegharị a, ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị ịmaliteghachi ahịa ejiji, nke ọdịda nke oriri na Spain na onye na-azụ ahịa na-achọ ọnụahịa ka mma.
2 Gịnị ka El Corte Inglés na-enye?
4.1 Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịma gbasara ụdị ụlọ ikpe bekee
El Corte Inglés bụ ọnwa ọhụrụ Pọtụfoliyo nke aka gị nke a na-achọ ka ya na ndị mpi megide ndị dike ugbu a n'ụwa.
Typedị agbụ ígwè ndị a agbanweela ụzọ ejiji ejiji, ọ bụghị naanị na Spain, kamakwa n'ụwa niile.
Iji nagide ihe a niile, ụlọ ahịa ngalaba na-eji ụdị dị iche iche dị iche iche sitere na ngalaba niile, ọkachamara na okomoko ma ọ bụ ọnụahịa.
Na Spain, nke bụ mba ebe nnukwu nkesa na-achịkwa ndị dike dị ka Inditex, mango o Cortefiel; Ụlọikpe Bekee O nwere ikike ịsọ mpi na ejiji na ụdị sọọsọ kachasị oke, mana n'otu ụzọ ahụ, ọ nwere nnukwu pọtụfoliyo nke akara aka ya nke ọ na-abịakwute ọtụtụ ndị na-azụ ahịa.
Kwa afọ, otu ụlọ ahịa ngalaba na-abawanye ma na-ewusi ọtụtụ ụdị onyinye aka ya na mgbasa ozi ọhụụ, ebe ha na-agbasawanye ụzọ dị nso ya maka nkesa dị ukwuu na ahịa mba ụwa, nke bụ Sfera.
Gịnị ka El Corte Inglés na-enye?
Ụlọikpe Bekee nwere Pọtụfoliyo nke ihe karịrị iri-na-ise nwere ụdị, nke ọ na-achọ ịdọta ọha na eze nwoke, nwanyị na ụmụaka site na ụdị ngwaahịa ọ bụla nwere ike ịbụ site na akpụkpọ ụkwụ na ngwa maka akwa ejiji. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye ụdị aha ọhụrụ na pọtụfoliyo ya kwa afọ, kpọọ naanị afọ abụọ:
Na 2012 ọ họọrọ ejiji nkịtị na nke ụmụaka na Southern Cotton na Free Style.
Na 2013, ọ malitere usoro Jo & Mr Joe, akara a bụ ọkachamara na akpa ụmụ nwoke, si otú ahụ na-erigbu ma na-eji mmepe nke njiri ejiji nke ọha na eze.
Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na mpaghara ejiji ụmụ nwanyị, ụlọ ọrụ Courtlọikpe Bekee na-arụ ọrụ na akara dị ka
Zendra, Uwe dị mfe
Ulakpụrụ na-eto eto
Omuma nka nka
Ala gbara osimiri n'ụsọ
N'ime ụdị ejiji ụmụ nwanyị, Gloria Ortiz na Elogy kwụpụtara, a na-ebupụta nke abụọ na mmekorita ya na onye mmebe Juanjo Oliva.
Maka ụmụ nwoke, Ụlọikpe Bekee nwere akara dị ka
Maka mpaghara ejiji ụmụaka, Ụlọikpe Bekee na-arụ ọrụ na
Ihe ọiceụottonụ owu.
N'otu ụzọ ahụ ụdị ọhụrụ si apụta, ha na-apụ n'anya. Ọnọdụ ọzọ nke akagbuola ahịrị bụ nke Gals & Guys, nke Ụlọikpe Bekee malitere na 2011 zuru ezu ọganihu na Spain nke Abercrombie & Fitch ihe ọhụụ nakwa na ọ kagburu na njedebe nke 2012. Na ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ, akara ndị dị ka Renoir apụwo n'anya.
A na-ekesa ụdị ndị a niile site na ngalaba ụlọ ahịa otu na site na ntanetị ndị a ma ama.
N'afọ ndị gara aga, ahịrị ndị dị ka Síntesis nwere naanị ụlọ ahịa akọwapụtara, mana ugbu a ndị otu ahụ etinyela netwọkụ nke ụlọ ahịa echebara ụdị ejiji dị elu, nke ndị ọzọ nwere ọkachamara n'akụkụ ụfọdụ na-akwado.
Sfera Ọ bịara na ebumnuche nke isoro ndị na-ere ahịa ejiji buru ibu na-emekọrịta ihe, mana ọ ga-agbanwe onyinye ya na atụmatụ ya iji chọta uru.
Ezigbo ọnụ ọgụgụ akụ na ụba nke akara a nyere El Corte Inglés idako na nzọ nke otu na-eto eto na Sfera n'èzí ahịa Spanish.
Companylọ ọrụ ahụ eguzobewo ma mepụta atụmatụ nke ọ na-achọ ịmalite usoro nke abụọ nke mmepe mba ụwa lekwasịrị anya na Latin America, Middle East na Asia. Sfera O nwekwara jisiri ike rute n’ahịa dị ka Switzerland.
Nke ọ na-achọ ugbu a ịkwalite atụmatụ mmepe ya na mpụga Spain, iji nwee ike ịsọ mpi ụwa na ndị ọzọ dịka Akara & Spencer.
Otu a nke ụlọ ahịa ngalaba na-achọ ụzọ isi nye akara ọhụrụ maka ụdị nke ya, nke a na-akwadebe nlọghachite nke Gloria Ortiz, nke ga-abanye textiles na-abụ akara nke ngụkọta anya. N'otu oge ụlọ ọrụ ahụ ga-ahazigharị ụdị ndị ahụ na ụmụ nwanyị na-ewu ewu.
Na usoro a, akara ga-eme ka itu ukwu ahụ gafee akpụkpọ ụkwụ na ngwa. Na nbanye nke akwa nke Gloria Ortiz Onye nwere ike iche maka nkwado nke ụdị ụmụ nwanyị ndị ọzọ Ụlọikpe Bekeedị ka Sendra o Ma.
Nwanyị a bụ ọha na - emegharị ụdị ahịa nke Ụlọikpe Bekee. Ihe data nke ndi otu ahia nke ndi ahia na ngwa ahia (Acotex) gosiputara ya, nwanyi ndi mmadu na 2015 meputara 37,2% nke onu ahia zuru oke na Spain, ndi nwoke na-ege nti na-anọchite anya 32,1% nke ngụkọta azụmahịa na nwata ahụ, 13,2%.
Maka afọ ụlọnga emechiri na February 2015, Ụlọikpe Bekee ọ nwere ntụgharị nke 4.305 nde euro ekele maka ejiji, ngwa, mma na ọla.
Ọnụọgụ ahụ gosipụtara 51,5% nke azụmahịa niile. N'ime ọnwa iri na abụọ tupu mmụba ahụ, ire ejiji, ngwa, mma na ọla si Ụlọikpe Bekee ha biliri 11,6%.
Aka na aka iji aka gị nwere ụdị, El Corte Inglés Ọ na-ahazigharị ụdị ndị dị na mpụga dị na osisi ejiji ụmụ nwanyị. Mmeghari a na-aza ma ntinye aka nke otu ahụ iji tinye ụlọ ọrụ ọhụrụ yana ọpụpụ nke ndị ọzọ.
N’oge na-adịbeghị anya, Ụlọikpe Bekee emeela ngagharị dị ukwuu na atụmatụ ya maka mpaghara ejiji, ụlọ ọrụ ahụ agbalịa ịsọ mpi megide nnukwu nkesa usoro nkesa, nke mbụ, na mwepụta nke Sfera ma emesia i binye aka n’ulo oru dika ulo oru Inditex, ndi n’eme ka igba oru dika Gbanwee ihe ọhụrụ, nke otu ụlọ ọrụ ngalaba na-echekwa ọnụ ahịa ya na ejiji.
Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịma gbasara ụdị ụlọ ikpe bekee
Otu a dị mkpa lekwasịrị anya n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ịbawanye pọtụfoliyo nke ụdị ejiji, ịkụ nzọ na oke oriri na okomoko. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo ogige pụrụ iche maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-enye ngwaahịa dị elu.
na Brandsdị nke Courtlọikpe Bekee Ha bụ ngosipụta nke atụmatụ nke ụlọ ahịa ndị a iji nye ezinụlọ niile uwe ejiji na ọnụ ala karịa nke nnukwu na ụdị ndị a ma ama.
Ụlọikpe Bekee O nweela mpempe akwụkwọ na-atọ ụtọ nke ụdị nke ya ma na-anọchite anya ụdị azụmaahịa na-aga nke ọma ma na-eto eto nke na-achọ ị gafere onwe ya na ndị na-asọmpi ya site na mkpọsa pụtara ìhè ma dị ire nke na-egosipụta ihe ọmụma zuru oke nke ọha na eze onye a na-agwa ya. mkpa na nchoputa nke ndi m na enye, obuna ma oburu na ha di n’isi ahia nke ahia a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Brandsdị kachasị mma nke Courtlọikpe Bekee
Google Campus Madrid: ntakịrị obere ndagwurugwu Silicon na Spain